✨INTSHA✨Idolophu endala-2min ukuhamba ukuya elunxwemeni✨ - I-Airbnb
✨INTSHA✨Idolophu endala-2min ukuhamba ukuya elunxwemeni✨
I-loft yonke sinombuki zindwendwe onguLuisa
Ungarhoxa simahla ngaphambi kwe-21 Sep.
I-Apartment ebekwe embindini, ngokukodwa entliziyweni yedolophu yakudala yase-Estepona (indlu yembali), kunye nokufikelela ngokuthe ngqo kwisitalato (isitalato sabahambi ngeenyawo). Ngaphantsi kwemizuzu emi-2 ukuhamba lunxweme lwaseRada. Umnyango wokungena kwindlu ukwindawo encinci yabahambi ngeenyawo, ilungele ukuthatha itafile ngaphandle kwaye ukwazi ukuba ne-aperitif okanye ukonwabele iingokuhlwa ebusuku.
Le ndlu iyinxalenye yendlu eyakhiwe ekuqaleni konyaka we-1900, ibuyiselwe ngokupheleleyo kwaye kunye nazo zonke iinkonzo, igcina iindonga zangaphandle eziziisentimitha ezingama-60 ububanzi, nto leyo eyenza kube igumbi elinobushushu obufanelekileyo, kuba ehlotyeni liyindlu ebanzi. ekhaya ukuba ungachithi ubushushu kwaye ebusika kuchasene noko. Indawo yokuhlala ibhaliswe kwiRegistry yezoKhenketho yeJunta de Andalucía kunye nekhowudi VFT / MA / 11577
Iintsuku eziyi-7 e Estepona
4.79 · Izimvo eziyi-152
Sisembindini, izitrato zabahamba ngeenyawo, zihonjiswe ngezityalo, indawo yokuphumla, yonwabele kunye nolwandle oluhamba imizuzu emibini yokuhamba, kunqabile ukuba kubekho ukufuduka okude, banazo zonke iinkonzo eziyimfuneko, iivenkile zokutyela, iivenkile, ulwandle, indawo yokupaka yoluntu kufutshane.
Indawo yokupaka yabucala kufutshane neflethi, jonga ubukho kunye nexabiso
Inombolo yomthetho: VFT/MA/11577